प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिनेछः चापागाईं -::DainikPatra
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिनेछः चापागाईं
नेपालमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । यसपटकको चुनावमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्चा निकै उत्कर्षमा छ । यसै परिपे्रक्षमा समय समयमा राजनैतिक वृत्तमा आलोचनात्मक प्रस्तुति दिइरहने वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक बालकृष्ण चापागार्इं सँग दैनिक पत्र डटकम को लागि पूजा पन्थीले गरेको कुराकानी ः
तपाई स्थानीय चुनावको समयमा निकै सक्रिय र बुटवलबाट समय सान्दर्भिक विचारोत्तेजक प्रस्तुति दिनु भएको थियो । अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मौन जस्तो देखिनु भएको छ । यसका केही कारण छन् कि ?
तपाईलाई त्यस्तो लागे होला । यथार्थ त्यस्तो हैन । म आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील छु । सक्रियपूर्वक लागेको छु । काममा खट्ने शैली र तरिका भने समय र परिस्थिति अनुसार फरक हुन सक्छ । विगतको शैली र अहिलेको शैलीमा मैले परिवर्तन ल्याएको छु ।
कस्तो शैलीगत परिवर्तन ? मैले बुझ्न सकिन नि ?
सबै कुरा एकैचोटि बुझ्न पनि गाह्रो पर्छ । मैले बुझाउन पनि कठिन हुन सक्छ । कतिपय यस्ता विषयहरु हुन्छन् । मान्छेले बुझाउन, सिकाउन, खटाउन र निर्देशित गरिहनु पर्दैन । स्वतः स्फूर्तःखटिन्छ । लागिन्छ । तपाईले पनि र अरुले पनि स्वतः स्वभाविक रुपमा बुझ्नेछन् ।
अझै पनि तपाईंले अमूर्त कुरा गर्नु भो , तपाईको जवाफ किन स्पष्ट आएन ?
मैले त स्पष्ट भने जस्तो लाग्छ । मेरो वैचारिक आस्था छ । तर म जुन स्थानमा छु । समाजले मलाई जुन दायित्व दिएको छ । त्यो स्थानबाट मैले नाङ्गो तरिकाले प्रस्तुत हुँदा सान्दर्भिक नहुन सक्छ । कसैलाई तोकेरै भनिदिओस् भन्ने लागेको पनि हुन सक्छ । तर मेरा आफ्नै मूल्य र मान्यताहरु छन्,दृष्टिकोणहरु छन्,आचारसंहिताहरु छन्,त्यसलाई आधार मानेर म प्रस्तुत हुन चाहन्छु । मेरो मान्यता भनेको जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न होऊन् । अधिकार सम्पन्न होऊन् । सुखी र समृद्ध समाज बनोस् भन्ने हो । त्यस दिशामा म क्रियाशील छु । म अग्रगामी सोंच र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध छु । तपाईं स्पष्ट हुनुहोस् ।
स्थानीयचुनाव ताका त एमाले र राप्रपा, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । फेरि अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ठ्याक्कै उल्टो भएकोछ नि ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
म सचेत सामाजिक अगुवा भएको नाताले यसलाई जिम्मेवारपूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरु खुल्नु र समय सन्दर्भमा एजेन्डाका आधारमा तालमेल,सहकार्य र एकता हुनुलाई स्वभाविक ठान्नु पर्छ । स्थानीय चुनावताकाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ । त्यतिबेलाको तालमेलभन्दा यसपटकको तालमेल सुझबुझयुक्त,स्वभाविक र सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्छ ।
यस पटकको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कस्तो परिणाम आउला भन्ने ठान्नु भएको छ ?
उत्तर ः यस पटकको चुनाव परिणाम बारे अनेकौं कोणबाट विश्लेषण शुरु भएको छ । जसले जे विश्लेषण गरे पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बीचमै हुने देखिन्छ । यो चुनावमा राजनैतिक ध्रुवीकरणको बहुआयामिक पक्ष देखिएको छ । त्यसैले विगतमा कुन पार्टीका कति मत आए भन्ने आधारमा गरिने चुनावी विश्लेषण र यसपटकको चुनावबाट आउने परिणाममा फरक परिस्थिति निर्माण पनि हुन सक्छ । विगतका चुनावलाई भन्दा यसपटकको चुनावलाई जनताले निर्देशित मान्यताका आधारमा नभई स्वविवेकीय दृष्टिकोण राख्दै स्वनिर्णय अनुसार मतदान गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् । यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
यो चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि आउने परिणामले मुलुकको राजनीतिक गन्तव्य कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ला भन्ने ठान्नु भएको छ ?
परिणाम त स्पष्टै छ । वाम तालमेल र लोकतन्त्रिक तालमेलकै उमेदवारहरु निर्वाचनमा जितेर आउने छन् । उनीहरुले के गर्नेछन् भन्ने कुराको पहिलो आधार त उनीहरुले प्रस्तुत गरेका घोषणा पत्रहरु र प्रतिबद्धताहरु नै हुन् । दोस्रो कुरा उनीहरुले अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्दै आएका व्यवहार हुन् । अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा उदाएका राजनैतिक दलहरु, नेतृत्व गण र उनीहरुका व्यवहारका आधारमा विश्लेषण गर्दा अग्रगामी दृष्टिकोण र चुनावी घोषणा पत्रहरुलाई हेर्दा वाम गठबन्धन तुलनात्मक रुपमा अगाडि आउने देखिन्छ । विगतका कमी कमजोरीहरुलाई सच्च्याउँदै सबल पक्षलाई आत्मसात गर्दै बदलिदो परिस्थिति अनुसार राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दै परिवर्तनको दिशामा निष्ठापूर्वक एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेमा छोटै अवधिमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु ।
तपाई एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हैसियतले नेपालमा राजनीतिक दलहरुको राज्य सञ्चालन सन्दर्भमा विगतमा के कस्ता कमजोरीहरु भएको ठान्नुहुन्छ ?
विगतमा के के भयो भनेर अब चर्चा गरिरहनु भन्दा अब राम्रो ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नु पर्छ ।हाम्रो मुलुकमा एकतन्त्रीय,निर्दलीय, प्रजातान्त्रिक,लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा सत्तामा पुगेका सबै दल र नेताहरुको व्यवहार नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । देखिसकेका छन् । नयाँ संविधान जारी भए पछि सम्पन्न स्थानीय चुनाव र अहिले सम्पन्न हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको परिणामपछि विगतको भन्दा आशा लाग्दो परिस्थिति नेपाली जनताले अनुभूत गर्न पाउने छन् । विगतमा जस्तो यथास्थितिवादी, दक्षिणपन्थी, घोर दक्षिणपन्थी, अवसरवादी, चरम अवसरवादी प्रवृत्तिबाट मुलुकका जिम्मेवार दल र नेताहरु मुक्त हुनु जरुरी छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावी परिणामपछि नेपालको राजनैतिक अवस्था के होला जस्तो लाग्छ?
परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ । समृद्धिको पक्षमा हुन्छ । शान्तिको पक्षमा हुन्छ । समुन्नत नेपालको पक्षमा हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा निरङ्कुशतावादी, अनुदारवादी, उदारवादी, प्रजातन्त्रवादी,लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी, वामपन्थी, उग्रवामपन्थी, दक्षिणपन्थी, घोर दक्षिणपन्थी, अवसरवादी र चरमअवसरवादी दृष्टिकोण र प्रवृत्तिहरुको प्रयोग भइसकेको अवस्था छ ।
नेपालको राजनीतिमा राजा, राजतन्त्र, पञ्च, राप्रपा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रित दल र ती दलका नेताहरुले सत्ता सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ । जनताले पनि उनीहरुको चरित्र र व्यवहारलाई राम्ररी बुझिसकेका छन् । कसका के कस्ता दृष्टिकोणहरु छन् । राष्ट्र र जनताको हितमा कसले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । जनताको ताजा अभिमतलाई मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावी परिणाले पनि प्रस्तुत गर्नेछ । यो चुनावी परिणाम आइसकेपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिनेछ । त्यो कोर्स भनेको क्रान्तिकारी परिवर्तन, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि,शान्ति ,जनताको हित र समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्ने खालको हुनेछ ।